Alshabaab oo sii wada qarxinta Leyrarka cadceeda ku shaqeeya & maamulka Banaadir oo ku fashilan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Alshabaab ayaa weli wada qarxinta baalayaasha ay ku xiran yihiin leyrarka ku shaqeeya cadceedda, waxeyna saaka qarxiyeen baalle ku yaalla kazoo horjeedka Isbitaalka Xooga ee degmada Hodon ee Muqdisho.
Qarax weyn oo saaka salaadii subax kadib laga maqlay qeybo ka mid ah Muqdisho ayaa noqday mid lala eegtay baalle uu ku xirnaa nal eleyska ku shaqeeya.
Ma jiro wax khasaare ah oo dadka kazoo gaaray qaraxaas, maadaama dadka socda xilligaas ay aad u yaraayeen, waxaase dhulka dhacay baallaha, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey goobjooge.
Alshabaab ayaa baallayaasha nucaas ugu magaca daray “Laafo Gaalo”, waxeyna qarxiyeen tobonaan ka mid ah, iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu ku fashilmay inuu soo badelo kuwii la qarxiyey.
Maamulka gobolka Banaadir oo markii hore ilaalin waayey baalayaasha oo inta badan la qarxiyo waqtiga salaadda subax ayaa hadana aan isku mashquulin iney soo badelaan baalayaasha Alshabaab qarxiyaan.
Masuul ka tirsan maamulka Shabeellaha Hoose oo shaaciyey arrin la qarinayey!